I-Candidiasis (thrush) iyisifo esiningi segciwane elibangelwa imfucumfucu yemvubelo, ngokuvamile izinhlobo ze-Candida (Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis), zingadluliselwa ngokocansi. Indawo evamile ye-thrush isesiswini, i-vulva, kodwa futhi ikhona endocervicitis ye-candidal, i-edometritis, i-salpingitis.
Ngokumelene nesimiso sokunciphisa umzimba okuvikela umzimba okwenzeka ngesikhathi sokuya esikhathini, ukukhulelwa, isifo sikashukela, uma uthatha ama-antibiotic noma ama-hormonal amalungiselelo, isikhunta esasibizwa ngokuthi i-saprophyte sitholakale impahla ye-pathogenic. Ngenxa yokunamathela okwenyukayo, banamathele ebhokisini lomhlaba we-epithelium, okwenza ukuphendula okuvuvukala okungenangqondo nokukhipha ama-cell cell. I-citaldiasis ye-Genital kaningi ayibangeli i-lesion esijulile ye-mucosa, kodwa nge-pathogenicity ephakeme i-pathogen ingene ezindaweni ezingaphansi kwe-intra-sub-appithelial, mhlawumbe ekusakazeni nasezimweni ezimbi kakhulu - ukusakazwa kwe-candidiasis.
I-Candidiasis vulvovaginitis ibonakaliswa yizimpawu ezinjengokubamba nokushisa, ukukhathazeka ngaphakathi kwesiswini, ukukhishwa kwekhredithi okuphawulekayo. I-membrane yamangqamuzana yezocansi i-hypermic futhi ivuvuka, emaphakathini, ukuqoqwa kwempi emhlophe. Nakuba i-citaldiasis ye-genital futhi inika owesifazane ubunzima obuningi, akayona impilo engozini.
Ukwelashwa kwe-candidiasis yangasese.
Manje kukhona izidakamizwa eziningi nezindlela zokwelapha i-thrush. Ngokujwayelekile ngaleyo njongo isisetshenziswa samagciwane noma amathebulethi asetshenziselwa ukungena emzimbeni, futhi lapho, ngaphansi kwethonya lokushisa komzimba, ukuchithwa. Sebenzisa futhi ama-creams kanye ne-sprays. Ezimweni ezimbi, amaphilisi asetshenziswa noma flucostat .
Uma uqaphela ukuthi unayo izimpawu ezifanayo, udinga ukuphuthuma ku-gynecologist, ukuyohlola futhi wenze ukuxilongwa okulungile. Ngokuvamile, izimpawu zezifo ezithathelwana ngocansi zingafana nezibonakaliso ze-candidiasis yangasese. Ngakho-ke, ukuzivocavoca kungadala ekuguleni kwesifo, futhi ngezinye izikhathi kungaba yingozi. Uma unezikhathi eziphindaphindiwe ze-candidiasis, uma usuvumelene nodokotela, ungathenga imithi yakho ekhemisi ngokwakho, ngaphandle kokubonisana ngaso sonke isikhathi.
Ukuvimbela ukutheleleka esikhathini esizayo.
- Gcina imithetho yokuhlanzeka komuntu siqu (uma kungenzeka, hlamba ngemuva kokuvakashela endlini yangasese, ungalokothi usebenzise indwangu yomunye umuntu, ungasula ngelinye ithawula.)
- Ungagqoke izingubo zangaphansi eziqinile futhi zokwenziwa.
- Ungasebenzisi ama-deodorants ezindaweni eziseduze, amathrekhi afundwayo. Lezi zidakamizwa zingabangela ukucasuka kwamalungu obulili futhi kwandise amathuba okutheleleka nge-candidiasis yangasese.
- Sebenzisa ikhondomu (ngaphandle kwama-flavour) ukugwema ukuthola ukutheleleka kwe-candida ngokobulili.
- Ungadli okumnandi kakhulu.
Ukwelashwa kwabalingani bocansi.
Ngokuvamile, ukutheleleka kobugqila kudluliselwa kumlingani owodwa wezocansi kuya kwesinye. Ngakho-ke, uma kubonakala i-candidiasis yesiswini komunye wabalingani kuyisifiso sokusebenzisa ikhondomu ngaphambi kokuthola ngokugcwele. Uma, emva kwakho konke, ukutheleleka kwenzekile, kanti umlingani wakho unempawu ze-thrush, ngakho-ke kuleli cala, kuyadingeka ukwelashwa okune-antifungal okwanele.
Izimfihlo zobusha zenyama yokuguga
Ukuphulukisa kanye nemilingo ye-agate
Indlela yokuphatha i-lymph nodes evulekile entanyeni?
Cinnamon kanye nemithi yayo yokwelapha
Ama-Almond Pastry Cookies
Sinqoba amahloni nehlazo labantwana
Isobho sosawoti namazambane
Amaphutha amakhulu owesifazane owenzayo ngokumelene nendoda yakhe
Ama-bhisikidi nge-chocolate nemifino
Kungani umzimba wokugcoba wesibeletho kudingekile?
Izindlovu ezinhle kakhulu zonyaka omusha we-2018 ngezinwele zanoma iyiphi ubude
Izimonyo zokuveza: ukunakekelwa
Intuition yamakhosikazi: siyakhula futhi sisebenzise